China Posture Corrector J15 Dhizaini uye Fakiti | Hongzhu
Chinyorwa Neoprene, Nylon Neoprene
Chimiro Kwemuchirimo / nguva yechando, yezhizha
Basa Kupwanya, kudzosera kumashure kwekugadzirisa
Feature Inofemerwa, inogara kwenguva refu
Ruvara Nhema yakasarudzika
Logo Yakasarudzika Rodha
Postural braces inofanira kupfekwa kwemaawa matatu pazuva. Maminitsi 15-25 chete, wobva wawedzera maminetsi makumi maviri pazuva. Shure nemafudzi ako zvishoma nezvishoma zvinogadzirisa, uye uchavaka ndangariro dzemhasuru nekuda kwekunyatsoita mushe Dzivisa kusimbisa kwakanyanya kuti udzivise kusawirirana. Haisati iri pfungwa yakanaka kupfeka chinzvimbo chetsigiro kwenguva refu yenguva. Iyo inogona kungoshandiswa senge yekushandisa kudzidzisa kuti ubatsire kudzoreredza chimiro chako. Posture straighteners haana kugadzirwa kuti apfeke, saka anokuvadza zvakanyanya pane zvakanaka. Anogadzirisa kumashure kutsigirwa ne lumbar pads anobatsira kupa zororo kubva mukukuvara uye kukuchengeta uchifamba. Inokurudzirwa kubatsira kudzikisa kurwadziwa kwekudzora kumashure kushungurudzika, kutsemuka uye mhasuru spasms. Iyi yakagadzikana yekumhara brace ndiyo nzira inodhura-yekudzivirira kutsvedza uye kurwadziwa kusingaperi kunobatana nako. Matambo uye tambo dzinogadziriswa zvizere, zvichikupa chaicho chiumbwa chemuviri wako kuti unyatsowana nyaradzo, iyo iwe unokurudzirwa kupfeka mune yakadzika. Isu tine chivimbo chekuti muchadanana neichi chigadzirwa uye tinotarisira kuti muchinacho nekukasira, hamugutsikani nacho kana machira ekotoni.
Yepfuura: Kugadzirisa Corrector J12
Inotevera: Smart Kuchengetera Corrector
Kumashure Brace Kusvitsa Corrector
Kudzorera Kumashure Corrector
Muviri Kuteedzera Corrector
Dhizaini Corrector Chishandiso
Posture Corrector Kune vana
Posture Corrector Kune vakadzi